Kuongorora kwakadzika kwe Testosterone Cypionate | AASraw
/Blog/garari/Kuongorora kwakadzika kwe Testosterone Cypionate
Posted on 11 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Munyika umo steroidasi yakave iyo-chinhu uye munhu wose achivashandisa kuti vaite zvinangwa zvemuviri wavo, kune chido chokuti iwe udzidze zvakawanda nezve Testosterone Cypionate. Tichakurukura zvinhu zvakawanda pamusoro peSteroid iyi kubva paTesttosterone dosage, kuti injove Testosterone, sei kubata neTesttosterone kudarika, kuongorora kwe Testosterone Cypionate pakati pevamwe. Zvose zvaunofanira kuita ndezvokugara pasi patinopinda munyika yeTesttosterone Cypionate.
Kufungisisa nezvese nzvimbo yakanakisisa Tenga Testosterone Cypionate online? AASraw.com isarudzo yakanakisisa. Isu inguva yeChina-based inoshandiswa mukugadzira, kudengesa, nekupararira kwemishonga inoshandiswa kwemishonga uye michina yakasanganisira Testosterone Cypionate.
Saka chii chinonzi testosterone cypionate?
Testosterone iyo steroid anabolic ndiyo yaiva yekutanga kugadzirwa mumusika. Kune rumwe rutivi, Testosterone Cypionate inhengo ye Testosterone inoshanda zvishoma nezvishoma, yakareba-ester uye ine mafuta-injectable. Inoshandiswa kurapa hypogonadism iyo inoshaya mu Testosterone mumuviri inokonzera zvinetso zvakasiyana-siyana zvine chokuita nevarume.
Kuva mishonga yemishonga, iwe unokwanisa kuzvipa iwe pachako kunyaradzwa kweimba yako mushure mekunge chiremba akuudza iwe kuti ungazviita sei. Nenguva isipi ichi-injectable, uye izvi zvinoita kuti zvive nyore kushandisa. Inowanikwawo muhupenyu hwayo.
Testosterone yakatanga kugadzirwa mu1935, uye pashure pemakore maviri yakabudiswa mumusika semishonga yemishonga. Pakutanga, yaive yakawanikwa mupepeti fomu uye gare gare yakanga yakafanana neester iyo inonzi injiramu inonzi Tesramsterone Cypionate.
Methyltestosterone, imwe yekutanga vanabolic steroid inofanira kugadzirwa yakabudiswa mu1935. Zvinosuruvarisa, zvakabatanidzwa ne hepatotoxicity, uye nekuda kweizvi, yakashanda. Inonzi testosterone yakareba-acting esters Testosterone Cypionate yakaiswa mumusika pakati pe1950s nekambani inonzi Upjohn. Pakutanga yaitengeswa pasi peDepo-Testosterone uye ichiri kuzivikanwa nezita rimwe chete.
Upjohn ave achibatanidzwa mukugadzirwa kweDepo-Testosterone kwemakore akapfuura makore makumi mashanu kubva pakatanga. Testosterone Cypionate inoshandiswa kuTesttosterone enanthate nevakawanda vomuviri uye vatambi. Izvo zviviri zvakafanana, asi hafu yavo-hupenyu yakasiyana.
Testosterone Cypionate yaiva mumwe wevanabolic steroid iyo yakagamuchirwa kushandiswa sechirwere chemishonga mu1970s. Yakave yakatemwa neCDA inoshandiswa chete muTesttosterone replacement therapy. Kwemakore, kushandiswa kwayo kwakadziviswa sezvo isina kukodzera kushandiswa kwevana nevakadzi. Testosterone cypionate yave ichipfuura sechirume chekuberekwa kwechirwere chemishonga kana inotorwa pa 200mg mwedzi wevhiki.
Chii chinonzi testosterone cypionate chinoshandiswa?
Testosterone Cypionate rine zvakawanda zvekushandisa muupenyu hwedu. Hewa maitiro.
Mune fitness yenyika, munhu anogara achiedza kuva akaisvonaka. Pasinei nokuti uri weightlifter kana mutambi wemitambo, uchaziva kuti dzimwe nguva makwikwi anogona kuva anotyisa. Zvimwe kunze kwekuzvigutsikana kunouya nekukunda, kupiwa medal kana kuwana nzvimbo munzvimbo yevashandi ndiyo chinhu chakanyanya kufarira kune vakawanda. Kuwana zvinhu zvakadaro muhupenyu hwako zvinogona kutora makore gumi kana kupfuura zvichienderana nemuviri wako. Asi nhau yakanaka ndeyekushandisa-kukurudzira zvinodhaka seTesttosterone Cypionate zvingakuita kuti uite zvinangwa zvako zvepfungwa.
Saka nei iyi mishonga inofadza kufanana nemaitiro gurus? Vanoita kuti mishonga iwedzere uye panguva imwechete inoita kuti iwe udzoke nokukurumidza kubva mukushanda zvakaoma nekuderedza kuwanda kwemaviri emusanganisi anowanikwa mukati mezvirongwa. Kubudirira neizvi ndechokuti vatambi vanogona kudzidzisa zvakaoma uye nguva dzose vasina kutengesa.
Testosterone Cypionate inobatsira mukuchengetedza mutsara unhu uye simba. Iyo inochengetedzawo simba remasimba nesimba. Chimwe chinhu chikuru ndechekuti iwe unogara uchitsvaga maitiro ako ekudzidzisa sezvo ichi chirwere chichavandudza uye chichikurudzira kubasa kwako.
Testosterone Cypionate inokurudzira kurasikirwa kwemafuta kuburikidza nekuvandudzika kwebasa remagetsi. Iyi steroid inokwanisa kuita izvi nekusunga ku-androgen receptor nyore nyore saka zvichiita kuti kupera kwemafuta uye kudzivirira kuumbwa kwemafuta matsva.
Inowedzerawo hutano hwakakwana mumuviri. Iyo inovaka musimba nokukurumidza saka izvo zvokudya zvakawanda zvaunodya zvinopedzwa zvinoshandiswa kuwedzera maronda akawanda panzvimbo yekuchengetwa se mafuta.
Testosterone Cypionate inoshandiswa mu androgen replacement therapy. Parizvino, inobvumirwa neDDA yekurapwa kwe hypogonadotropic uye yekutanga hypogonadism (inowanikwa kana kuberekwa). Ichi chirwere ndechirwere umo varume vasingakwanisi kubereka zvakakwana zvehomoni Testosterone. Ndeupi musiyano pakati pezviviri?
Hypogonadotropic hypogonadism- Izvo zvinoitika apo dzimwe zvikamu zveuropi (pituitary gland kana hypothalamus) inotaurirana nematete epanguva yekubudisa testosterone inokuvara.
Chii chinonzi nandrolone poda yakashandiswa / nandrolone inobatsira?
Kunyanya hypogonadism- Zvinowanikwa apo masheti asingakwanisi kubereka testosterone yakakwana.
Kana munhu ari kutambura pane izvozvi anoenda; low sex sex drive, erectile dysfunction (zvinetso pakuwana nekuchengetedza erection), kusanyatsofungisisa uye mafungiro anochinja. Izvo zvinogonawo kutungamirira kukurapa kwepanyama, kurasikirwa kwemasimba mashoma uye mvere dzomuviri, gynecomastia (kukura kwezamu) uye kuderedzwa kukura kwezvose mapeti uye peni. Zvisinei, kuchengetedzwa kwaro mukurapa kwekupedzisira-kutanga kwe hypogonadism muvarume hakuna kumbosimbiswa.
Uyezve, inoshandiswa kurapa osteoporosis, hormone replacement therapy mune transgender marume, oligospermia (ine uwandu hwemumiririro ediki), kunonoka kwehupombwe, hutano hwepamu, uye kenza yemazamu.
Iko testosterone cypionate inoshanda sei?
Testosterone Cypionate chimwe chezvokuguma zvegoni uye izvo zvinobatanidzwa mukukura kwezvikamu zvepabonde zvevarume. Inobatsirawo mukuchengetedza kwehutano hwepabonde. Dzinosanganisira kugovera mafuta, kuchinja mumuviri mutsvina, kurira kwezwi, izwi rekuwedzera, uye kukura kweprotate nekukura.
Izvi zvinodhaka zvakafanana neTesttosterone, asi zvakakosha ndezvokuti zvine nguva yakareba yehupenyu uye kusunungurwa kwezinga. Mukati maawa e24 ekutungamira kwayo, inowedzera tevere testosterone kusvika ku400%. Iro androgen mazinga anogona kuramba akareba kwemazuva matatu kusvika mashanu apfuura mushure mekutonga kwayo. Pane imwe nguva pane hutachiona hwehutachiona hwechirwere ichi, zvinogona kukonzera kuvhiringidzika kwemukati uye kuchinja kwemu libido nemafungiro.
Testosterone Cypionate inoshanda nenzira mbiri dzakasiyana. Chokutanga ndechokuti kutendeukira kune esradiol mushure mekushandiswa kwevamwe isrogen receptors. Inoshandawo kuburikidza ne androgen receptor activation.
Icho chinonzi anabolic esterified saka inogadzikana zvikuru kune mafuta. Testosterone uye esters yayo inofanira kuendeswa kuburikidza nejisi sezvo isina kuiswa nokukurumidza nechiropa kana yapiwa muromo.
Pane imwe nguva pane kutengesa kwechirwere ichi chemishonga, iyo yakawanda yekupararira inenge yakapoteredza 1 L / kg.
Apo kunwa kwemajoka kunoitika, mishonga inopinda muropa rekupararira kuti iongororwe. Pamusoro pokushandurwa, 40% yaro inosunga ku plasma globulin apo 2% yayo yasara isina kuiswa kana yakaiswa kune mamwe mapuroteni kusanganisira albumin.
Nokuda kwechirwere ichi kuti utange kushanda, inoda kuongororwa ne enzymes. Basa rekubatsira ndekuputsa chisungo pakati peTesttosterone uye chikamu chechi ester cheiyo molecule. Testosterone Cypionate ine nguva yakareba yekugadzirisa nguva nemhaka yehukuru hukuru hwayo ester. Kana imwe nguva kupatsanurwa kuchiitika, testosterone inoputsika muC17 ketosteroids. Izvo zvinoitwa kuburikidza neviri, kusiyana nemigwagwa. Dihydrotestosterone uye estradiol ndiyo inonyanya kushandiswa metabolites. Testosterone yakaputsika muDHT muhurogenital tract, chiropa, uye ganda. Dihydrotestosterone inowedzera kuputsika mukati me androstanediol.
90% yesero re testosterone rakapiwa intramuscularly rinobviswa mumuguta nenzira yeglucuronic, testosterone's sulfuric acid conjugates uye metabolites yayo. Munharaunda ye6% yevamwe testosterone inobviswa kuburikidza nedzimwe nyanzvi mune fomu isina kufananidzwa.
Testosterone Cypionate hafu yeupenyu humwe hwemarefu kubva pane iyo mazuva masere.
Pfungwa dze testosterone cypionate
Testosterone Cypionate inoshandiswa mukurapa zviratidzo zve hypogonadism mune varume. Ichi chiitiko chinowanikwa nekutadza kwemuviri kubereka hutano hwakakwana hwemhondi testosterone.
Testosterone Cypionate inowanikwa nenzira yegadziriro inonzi injectable. Inofanira kuiswa mumisungo, uye chinhu chakanakisisa pamusoro pacho ndechokuti iwe unogona kuzviita iwe pachako kunyaradzwa kweimba yako mushure mokukurukurirana kuti ungazviita sei nechiremba wako.
Testosterone Cypionate solution inopiwa semuviri wezvinodhaka uye zita rechirwere chemishonga. Zita racho ndiro Depo-testosterone.
Migumisiro ye testosterone cypionate yekuvaka muviri
Chero ani zvake akashandisa Testosterone Cypionate anogona kuratidza zviitiko zvinoshamisa zvinopa muviri. Simba rayo rakaita kuti riongorwe steroid yepamusoro mumusika. Uyezve, inopa zviitiko zvinokurumidza uye zvinofadza.
Kamwe iwe wakashandisa iyo kwemavhiki gumi nemaviri, iwe uchava;
Kuwedzera kwemafuta kurasikirwa. Icho chiri kuburikidza nekudzvinyirira kweesrogen.
Iyo inogadzirisa mishonga nokukurumidza nokusimudza satellite cell function.
Nokushandisa nitrogen kuchengetedza, inokupa hukuru hwemutsara unowana.
Testosterone Cypionate inowedzera simba rako.
Uyezve, Testosterone inodzivisa kukanganiswa kwemamwe mahomoni anokwanisa kukonzera kurasikirwa kwemisumbu panguva yekucheka.
Rutivi rwomukati we testosterone cypionate
Zvinoshamisa kuti mishonga iyi haina kukonzera kugona. Chero zvaunogona kutambura kubva kuTesttosterone Cypionate madhara, nhau dzakanaka ndeyokuti dzinokwanisa kutakurwa.
Zvikamu zvinowanzovhiringidza ndezvi;
Acne- Kushandisa Testosterone Cypionate kunogona kukonzera pimples. Zvinogona kunge zvakaoma, asi iwe uchada chokwadi chokuti mushonga unoshanda huripo. Mishonga yepamusoro yakadai sa glycolic acid, benzoyl peroxide, uye salicylic acid ndiyo yakakosha pakurapa nyoro kusvika pamwero. Iwe unofanirwawo kuchengetedza hutano hwekunaka uye maitiro kuti uwane ganda rakajeka.
Bvudzi kukura- Iyi mishonga inogona kukonzera kukura kwemvere mune nzvimbo dzisingatarisirwi. Kana iwe unotambura nekuve nemuviri wakawandisa kana bvudzi rezvepiso, pane dzimwe nzira dzaungapedza nadzo izvozvo. Chokutanga ndechokuveura ndebvu uchishandisa shaver yegesi kana rezzi. Kana kuveura kunowanzokupa razor zvinopisa, unogona kufunga kutenga kirimu inotapira.
Iwe unogonawo kutambisa kana kuti tweeze kubvisa bvudzi kubva mumudzi. Kunyengedza imwe nzira inokurumidza yekubvisa bvudzi kubva mumudzi. Kushandiswa kwemakemikari akasimba anozivikanwa semafilatories anogona kukubatsira zvikuru, asi kana une ganda rakanyanya, iwe unofanira kutanga uedzesa panzvimbo duku. Dzimwe nzira dzokurwisana nevhudzi rakanyanya kupfurikidza kuburikidza nekushandiswa kwemishonga, kushandiswa kwebvudzi kusveta, uye electrolysis.
Kuchema uye kurwadziwa panzvimbo yejojo-Haufaniri kutambudzika chete nokuti wakatambura kana kuti kuzvimba panzvimbo yejojo. Kana iwe wakambopfura, iwe unogona kutotaurira kuti kuora kunowanzoitika kana ukaramba kwemazuva mashomanana. Kuti uderedze izvi, iva nechokwadi chokuti iwe unotora nzvimbo inorohwa. Kana iwe uchiramba usingafambi, nzvimbo yacho inogona kukuvadza zvakanyanya. Kuti uite kuti marwadzo aite zvakanaka, unogona kufunga nezvekutora marwadzo ekudzorera kuti ubatsire nemarwadzo uye kuzvimba. Imwe nzira yakanakisisa yekugadzirisa nayo izvi ndeyokufambisa girazi rinopisa pane imwe nzvimbo iyo pfuti yakapiwa. Iwe unofanirwa, zvisinei, tsvaka rubatsiro rwechiremba iwe wakaziva kuti marwadzo kana kupfugama hakusi kuderedza mukati meawa 48.
Gynecomastia (kuwedzerwa kwezamu) - Unogona kuona kuti chifuva chako chave chakakura pashure pokushandisa iyi mishonga. Izvozvo hazvifaniri kukunetsa iwe zvizhinji; mazano awa anotevera achauya zvakanaka. Yokutanga iri kushandisa kushandura shati. Icho chisarudzo chakanakisisa sezvo zviri nyore pachikwata uye kunoderedza kuonekwa kwechifuva zvakanaka. Iwe unogona zvakare kuedza mamwe gynecomastia maitiro se-high-intensity interval training (HIIT), kusvitsa-ups, dumbbell incline press, uye vakagara mumutsara. Kuti kuderedze kuonekwa kwechifuva chinoputika, iwe unofanirwa kuedza zvakaoma kuvaka misumbu. Ichaita kuti mazamu makuru aone seasingatauri. Uye nokuti mafuta anokurudzira kutuka, iwe unofanirwa kudzivisa kudya kwemafuta uye kudya mafuta ane utano hwakadai samajiki, mashizha ane mashizha, hove dzakakora uye mbatata. Imwe nzira yekugadzirisa gynecomastia ndeyokuvhiyiwa iyo ichabvisa mafuta mumazamu.
Zvimwe zvinogadziriswa nguva dzose -Kunyanya kushandiswa kwemaitiro kunowanzoitika asi kuva nevasingadikanwi kunogona kunge kunoparadza. Hazvifaniri kukumisa kushandisa Testosterone Cypionate. Iwe unogona nguva dzose kutarisana chero kupi zvako kusina kujairika kunouya nenzira yako. Panguva ino uri kuzvibvunza pachako kuti ungazviita sei. Kana zvikaitika, iwe haufaniri kunzwa sokunge nyika iri kupwanya iwe; gara pasi, kufema zvishoma uye ugare wakadzikama. Kuti uderedze kunyadziswa kunouya naro, unogona kuvhara erection using laptop, shati kana jacket. Hapana chikonzero chekutsamwa, munhu wose anonzwa izvi uye zvichida hapana munhu akacherechedza kuti une imwe. Iwe unogonawo kufungisisa, edza nekuzvivhiringidza iwe, tora mvura inotonhora, uwane bhati yakashambidza kana uve nemitoo yakanaka sekukwira. Izvo zvakadaro zvakakurudzirwa kuti kana zvirevo zvinorwadza, iwe unofanira kutsvaga kutarisa kwachiremba.
Erections iyo inogara kwenguva yakareba kudarika -Kurongwa kunotora maawa mana kana kupfuura hakusi. Testosterone Cypionate inogona kukonzera izvi, uye iwe unogona kutarisana neizvi nekuisa ice packs panzvimbo. Neizvi, erection yakasimba inogona kuenda muminiti. Chiremba anogona kukupa mapiritsi kana majekiseni kuti uite nayo.
Musoro-Musoro unogona kuunzwa nekushandiswa kwe Testosterone Cypionate. Zvinogona kunge zvakaoma kushanda, kutyaira kana kutakura hurukuro nemusoro wako wakagumbuka asi iwe unogona kuita zvinopfuura kungovata pamubhedha uye kumirira kuti iende yoga. Iwe unogona kuedza kutora marwadzo anorwadza-e-counter sezvinonzi aspirin, naproxen, ibuprofen, uye acetaminophen. Unogonawo kushandisa mazano anotevera kuti utsungirire marwadzo. Svinura meso ako ugozorora. Iwe unogonawo kuunganidza ma temberi dzako uye mutsipa wako. Inokurudzirwa zvakare kuti iwe uzorore uye uedze kuisa jira rakasviba kana kuti kupisa pfupa kumativi ose ehenya nepamutsipa. Tsvaga kurapwa kana kurwadziwa kuchiripo.
Mafungiro anoshanduka- Dzimwe nguva iwe unganzwa sokuti iwe unoda kupedza zuva rako roga kana kune mamwe mazuva, unganzwa uchifara. Zvinowanzoitika chero bedzi zvisingakanganisi mabasa ako ezuva nezuva. Kune rumwe rutivi, kuora mwoyo kwakanyanya kuchinja kungave chiratidzo chokuti chimwe chinhu hachina kunaka. Testosterone inogona kukonzera ichi uye kana ichiita, kubata nayo iyo inopera. Kana ukashanda nguva dzose, uchaona kuti kuzviita kunosimudzira mafungiro ako pakarepo. Kudya kudya kwakagadzikana hakusi chinhu chinonyanya kukosha muupenyu hwako hwepanyama, asi kunobatsirawo pakuvandudza mafungiro ako. Iwe uchazofanirawo kudzidzira kusununguka nokuita zvekunyaradza miitiro yakafanana nekufungisisa uye yoga. Tsvaga chiremba kana iwe unonzwa sokuti mafungiro ako ari kutora hupenyu hwako.
Kuwedzerwa mumunhu wemunhu kuverenga mushure mokunge mishonga inoshandiswa mukukwirira kwepamusoro-Kana uri kutambudzika kuwana mumwe wako musikana nekuda kwekushandisa Testosterone Cypionate iwe unogona kutapurirwa mahomoni uye mishonga yekugadzirisa izvi. Zvimwe kunze kwekuti iwe unogona kushandisawo rubatsiro rwekuberekwa kwehutano (ART) maitiro. Kana kurapwa kuchiita sokuti hako maturo, unogona kuwedzera huwandu hwezviitiko zvaunoita zvepabonde kana kuita zvepabonde kana mbeu inogona kuitika. Kudzivisa mabhairiri anokwanisa kudzivirira kufamba kwechimiro inzira yakanakisisa yekugadzirisa izvi.
Kana zvose izvi zvikamu zvinokonzera zvinyoro, saka zvinotarisirwa kuti zviende pachavo pachavo mushure memamwe mazuva kana masvondo mashoma. Kana zvikasadaro, taura nemumwe wako wemishonga kana chiremba.
Aya ndiwo matambudziko akadai anofanira kutorwa zvakanyanya. Kana ukangotarisa chimwe chezviratidzo izvi, danaidza chiremba wako pakarepo. Kumbira rubatsiro rwekukurumidza kana iwe uchinzwa sokuti zviratidzo zvinopisa upenyu uye kana iwe uchifunga kuti ndezvekukurumidzira mune zvehutano. Heano maitiro emigumisiro uye zviratidzo zvaunofanira kutarisa;
Kurwisa Kwemwoyo-Kuziva kuti uri kutambura kubva kune imwe, unogona kuona kuti une zvinotevera; kusagadzikana mumuviri wako wepamusoro, kufema kwenguva pfupi, nekurwadziwa kwepfuva.
Kuwedzera mu prostate gland ukuru. Icho chiratidzo kune; kushaya kukwanisa kubvisa chidimbu, kushungurudza paunenge uchida kurinate, uine ruzivo rwusina simba rwemuti kana kuti unopera uye unodzoka uye unetseka kutanga kutanga. Chimwe chiratidzo chiratidzo (kunzwa kwokutsvaira husiku usiku) uye kukurumidza uye kunowanzodiwa kuti urinate.
Stroke- Kutaura kwakanyanyisa kunogona kuisa chiratidzo uye kunzwawo kusimba kune rumwe rutivi rwemuviri.
Chirwere cheprostate- Chiremba wako anofanira kutarisa chero dambudziko re prostate gland pamberi uye panguva yekurapa neTesttosterone Cypionate kunyanya kana uri makore makumi matanhatu nemashanu kana kupfuura.
Zvinetso zveropa - Zvinogona kuratidzirwa nehizha hwemaziso kana ganda, rine ruvara rwemavara-mavara, kurasikirwa nenzara, kuneta kusina kujairika, girapa-ruvara-gorofu, kutora marwadzo nyore nyore kupfuura kuwanzana uye kuputika kwemakumbo nemakumbo. Iwe unogonawo kunzwa kurwadziwa kwepamuviri uye kurwadziwa, kurutsira uye kusuruvara.
Polycythemia- Iko ndiko kukwira kweropa rekuyera ropa. Zviratidzo zvazvo; kunonoka mukunyatsocherechedza, kuneta, kuvhara ropa, kurohwa, kuvhiringidzika, musoro nekudzikinurwa kwechiso.
Kuburitswa kwepulmonary- Iyi ndiyo kuumbwa kweropavha mumapapu. Zviratidzo zvaro zvinoputira kunze kweropa, kukurumidza kusuruvara, kunzwa kusvibiswa kana kutsamwa, kupera, kushaya chifuva kana kurwadziwa kunowanikwa kana iwe ukatora kufema kwakanyanya uye kupera kwekufema.
Mvura yakadzika inopisa-Kuumbwa kweropa makumbo mumakumbo ako 'makadzika akadzika inoratidzirwa nekurwadziwa uye kurira kwemakumbo ako.
Muyero we testosterone cypionate
Testosterone cypionate dosage inoshandiswa nezvimwe zvinhu. Izvi ndizvo;
Mamiriro ezvinhu ari kubatwa.
Iyo yakaoma sei mamiriro acho ezvinhu
Zvimwe zvirwere zvaungave uine
Kune miviri miviri yeTesttosterone Cypionate yekutanga kuva maitiro chaiwo. Iyo inogadziriswa inogadziriswa nesimba re 100mg / ml uye 200mg / ml.
Yechipiri ndiyo dhiyabhorosi Depo-testosterone iyo iriwo mujinga rejodzi. Inowanika mu 100mg / ml uye 200mg / ml.
Chiitiko chekutanga kuyeza-Muyero uyo chiremba achakupa uchabva pahutano hwako nezera. Kubva pane zvaunoda chiremba anogona kuziva kuti ndeipi iyo yakakosha iwe. Anokwanisa kupa chirwere che 50-400 mg kwevhiki rimwe nerimwe re 2-4.
Nhamba inowedzera- Unogona kukurudzirwa nachiremba wako kuti awedzere kuwedzera kwezviyero zvichienderana nemhinduro yako kumushonga, maitiro eropa testosterone nemigumisiro.
Iyo yakawanda miviri yemishonga iyi ndeye 400 mg injection mu musisi kwemavhiki maviri.
Child dosage (12-17 makore)
Chimiro chekutanga chekuita-Chiremba wako acharondedzera dhiyabhorosi yemwana wako zvichienderana nehutano hwake nezera. Achapa chiremba maererano nezvamunoda. Kazhinji, anogona kupa chirwere che 50-400 mg mujinga mumusana wako muduku mumavhiki maviri kusvika mana.
Kuwedzera kwehuwandu- Chiremba angasarudza kuwedzera mukana wevana vako zvichienderana nemigumisiro yavo, kupindura kurapwa uye maitiro eropa testosterone.
Izvo zvakanyanya kuwedzerwa kuiswa mumutsipa wemwana wako zvinofanira kuva 400 mg kwevhiki mbiri.
Child dosage (0-11 makore)
Dzidzo pamusoro pekuchengetedzwa uye kukwanisa kwemishonga iyi kuvana vasati vava nemakore gumi nevaviri vasati vamboitwa.
Nhamba yekurapa hypogonadotropic hypogonadism
Dhigirii yevakuru (makore 18 nepamusoro)
Chimiro chekutanga kutora-Muyero wako unopesana maererano nekuongorora kwako uye zera. Chiremba anokwanisa kusarudza pamutengo zvichienderana nezvido zvako. Muyero we 50-400mg injection mu musumbu kwevhiki mbiri kusvika ina.
Nhamba inowedzera- Chiremba angarayira kuti kuwedzerwa muyero zvichienderana nemigumisiro, kupindura kurapwa uye maitiro eropa testosterone.
Chiremu chepamusoro che 400 mg jekeseni mumutsipa wako masikati maviri.
Chimiro chekutanga chekuita-Muyero wemwana wako unofanirwa nehutano uye makore avo. Chiremba anosarudza izvi zvichienderana nezvinodiwa nemwana wako. Kazhinji, muyero unofanira kunge uri 50-400 mg mujenya mushure mushure memavhiki e2-4.
Nhamba inowedzera-Dhiyabhorosi yemwana wako inogona kugadziriswa maererano nemigumisiro yavanowana, kupindura kwavo kurapwa uye maitiro eropa testosterone.
Iyo yakawanda inoshandiswa yakaiswa mumusana wemwana wako inofanira kuva 400mg kwevhiki mbiri.
Izvo hazvisati zvasimbiswa kana mishonga iyi yakachengeteka kana inoshanda kuti ishandiswe nevana vasiri pasi pemakore gumi nemaviri.
Kana iwe uchiri kushandisa kuti uite musimba kuti uwane mitambo inoshandiswa muyero we 100-200 mg yemuropa wepaiti pavhiki yakakwana. Mushure memavhiki mana, unogona kuwedzera muyero zvichienderana nemigumisiro yaunowana pamuviri wako kana maererano nekuti muviri unoita sei nekushandiswa kwemishonga.
Nguva dzose, testosterone cypionate inoshandiswa kurwisana nematambudziko ekuderedza T-mamwe emamwe steroid ayo munhu angave ari kutora. Kana yakashandiswa nokuda kweizvi, Testosterone Cypionate 200mg-400mg ndiyo chirwere.
Kutenderera kwe testosterone cypionate
Kana iwe uchida kutora Testosterone Cypionate injections ivo pachavo nechinangwa chekudurura mafuta nekuvaka masimba, kutenderera kwako kunofanira kunge kwakaita seizvi:
Testosterone Cypionate Cycle inofanira kunge iri 200mg vhiki nevhiki kubva pavhiki 1 kusvika pavhiki yechigumi nembiri. Iwe unofanirwa, zvisinei, cherechedza kuti kana iwe uri kuvhara Testosterone Cypionate kune imwe imwe steroid saka kuyerwa kunoshandiswa. Heino chikonzero nei?
Steroid yese ine imwe hafu yeupenyu. Iwe unofunga kufunga izvi usati wasarudza kuisa mamwe steroid. Uyewo, iwe unofanirwa kuchenjerera paunotanga mutsara wekutengesa nokuti iwe hauzivi kuti muviri wako uchaita sei pane imwe steroid. Kuti udzivise zvinetso ita nechokwadi kuti unoedza steroid yese yakapiwa iwe pachayo. Unogonawo kuzvidzivirira uye kushandisa steroid imwe panguva.
Iko kurapwa kwakakosha sekutora steroidzi pachavo. Nokuti, mushure mokushandiswa kweTesttosterone Cypionate, kukwanisa kwemuviri wako kubudisa iyo hormone ikozvino kwakadziviswa. Mushure mokunge iwe wapera nehutachiona weT Testosterone, muviri wako unogona kugumburwa neestrogen. Izvi ndezvokuti muviri wako wakanga uri kuvimba nemajekiseni kuti upiwe testosterone panzvimbo iyo saka ma testes haagoni kubereka chero.
Testosterone cypionate macheno
Usati washandisa mishonga iyi, unoda kuziva chii chingaitika kumuviri wako. Izvo zvinogona kukonzera hypercalcemia in immobile patients. Kana izvi zvikaitika, iwe unofanira kubvisa kushandiswa kwemishonga pakarepo.
Dzivisa kushandiswa kwenguva refu kwechirwere ichi muhope yakakura nokuti inogona kukonzera zvinetso zvinopisa upenyu setiziosis hepatis, hepatocellular carcinoma, uye hepatic adenomas.
Kunyange zvazvo zvisati zvichisimbiswa, varwere vemazuva ano vanonyeverwa kushandiswa kwechirwere ichi nokuti zvinogona kukonzera prostatic carcinoma uye prostatic hypertrophy.
Testosterone Cypionate inogona kukonzera zviitiko zvevhutu zvinokonzera mhuka zvinogona kuratidzirwa nekuperevedza kwekufema kwakanyanya, edema, nekurwadziwa. Kana iwe uchitambura kubva pane izvi, rega kushandisa chiremba uye utarise nemamiriro ezvinhu zvakakodzera.
Kune vanhu vanoshandisa zvinodhaka izvi, zvinogona kukonzera kukanganisika kwepfungwa nehutano hwemwoyo. Sezvo zvichikonzera Edema, zvinogona kunge zvichityisidzira vanhu vane hutachiona, hupombwe uye chirwere chemwoyo. Gynecomastia inogonawo kukura.
Iwaini inosvini inoshandiswa sekuchengetedza inotungamirira kumigumisiro yakakomba yakafanana neyo gasping syndrome. Mukuderera kwakaderera, zvingasakukanganisa iwe. Uyewo, kune varume vane hutano vakambomira kunonoka ekuyaruka vanogona kutambura nekuve nekukwirira kuduku. Iko nokuti inokanganisa kusveta kwemapfupa.
Zvakadini kana ndikashayikwa nhamba kana kudarika
Testosterone Cypionate injection ndeyekugara kwenguva refu uye saka, inogona kukonzera kukanganisa kwakanyanya kana isina kutorwa nenzira yakarurama.
Kana ukarega kutora mishonga pakarepo kana kuti usatora zvachose zvinogona kuita kuti mishonga isashanda zvakanaka. Chikonzero chacho ndechokuti mushonga wacho ushande zvakanaka, mari yakatarwa inofanira kuva mumuviri wako nguva dzose. Kana iwe usingatori mishonga iyi, unogona kutambudza zviratidzo zve testosterone.
Kana iwe uchinge warasikirwa newaini kana kukundikana kutora mushonga maererano nesheti, inogona kusashanda zvakanaka kana kurega kushanda zvakakwana. Izvi ndezvokuti kuti mushonga wacho uite zvakanaka, imwe yemari inofanira kuva mumuviri nguva dzose. Iwe haufaniri kutora kudhakwa kwechikwata muchinangwa chekutora murasi unoshaiwa. Zvinogona kukonzera kukanganisika kwemigumisiro. Iwe unorayirwa kudana chiremba wako uye kumuudza nguva yekupedzisira iwe wakapinza testosterone cypionate. Iye / iye achakubatsira iwe kuti uuye neine dosing purogiramu.
Kana iwe uine chekuita cheTesttosterone zvinoreva kuti iwe uchava nehuwandu hwemishonga iyi mumuviri wako. Zviratidzo zvaro zvinogona kusanganisira:
Kupera mu mbeu yehuta
Iwe unogona kuwana zvisarudzo zvinogara kwenguva yakareba kupfuura yakasarudzwa
Iwe unogona kunge uine erections nguva dzose
Gynecomastia (kukura zvakanyanya kwezamu)
Kuzvimba nekurwadziwa pajw.org
Kana iwe uchifungidzira kuti watora zvakawanda zveTesttosterone Cypionate, taura nechiremba wako kana chero nzvimbo yekudzivirira chepfu yepakati. Kana zviratidzo zvako zvakanyanya, enda kuchipinda chekukurumidzira pakarepo.
Nzira yekuziva kana mushonga wacho uri kushanda- Unogona kuziva kana mushonga wako uripo uri kushanda. Iwe uchaona kuti zviratidzo zvepasi testosterone zvakaderera.
Kuchengetedzwa kweTestto Cypionate
Kuti udzivise dzimwe matambudziko paTesttosterone, unoda kutaura nachiremba wako kuitira kuti akwanise kukuudza kana iwe wakakwanisa kushandisa chiremba. Kana uine mibvunzo, unogona kugara uchibvunza kubva kuna chiremba wako kuti unzwisise zviri nani mishonga iyi. Ndezvipi zvinhu zvaunofanira kuudza chiremba wako usati wawana injection ya Testosterone Cypionate?
Rega chiremba azive kana uri weergoric kune iyi mishonga kana chero mishonga ipi zvayo yaunogona kuva nayo. Kukosha kweizvi ndechokuti mishonga inogona kuva nezvimwe zvikamu zvinoshanda zvingangodaro.
Chiremba anofanirwawo kunge achiziva nezvenhoroondo yako yezvechirwere semuenzaniso kana iwe munguva yakapfuura wakabatwa nechirwere cheshuga, chirwere chekurara, chirwere chakawedzera, kenza (kenza yeprostate, kenza yemazamu mumarume), kukonzerwa neropa, high cholesterol, zvinetso zvepvo, chiropa matambudziko, kurohwa, chirwere chemwoyo (zvakadai sekurwadziwa kwemwoyo, kurwadziwa kwepfupa uye mwoyo kusakonzera) uye ropa rinoputika mumapapu nemakumbo.
Kana uine chirwere cheshuga, ichi chinodhaka chinogona kuderedza shuga yako yeropa. Kuti uve nerunyararo rwepfungwa, iva nechokwadi kuti unotarisa shuga yako yeropa nguva nenguva sezvinorayirwa uye regai chiremba azive zvawanikwa. Kana ukacherechedza chero zviratidzo zveshuga shoma shoma dzakadai sekudzikisa tsoka kana maoko, chizivi, kutadza kuona, nzara, kukurumidza kushaya mwoyo, kuzununguka, kana kukurumidza kusurudzira udza chiremba wako pakarepo. Kuti urwise izvi, chiremba wako anogona kuita shanduko pane kudya kwako, chirongwa chekuita zvekuita, uye chirwere cheshuga.
Uyezve, Testosterone Cypionate inogona kukanganisa cholesterol yako nekudaro inowedzera dambudziko reropa remvura (coronary artery disease) nezvinetso zvemwoyo. Chinhu chakachengeteka ndechekuita kuti chiremba aongorore cholesterol yako zvakanyanya.
Ratidza chiremba wako kana iwe usingakwanisi kufamba kana kuti uine bhedha kwenguva refu uchishandisa Testosterone Cypionate. Kuti udzivise matambudziko, unofanira kuchengeta ropa rako calcium level nguva dzose. Kana uri kuvhiyiwa munguva pfupi, iwe unofanira kuzivisa dentist wako kana chiremba pamusoro pemishonga yose yauri kushandisa panguva iyoyo. Inofanira kusanganisira miti yose yemishonga, isiri mishonga, nemishonga yemishonga.
Paunenge uchishandisa ichi chirwere kune wako muduku, kuchenjera kukuru kunofanira kutorwa nokuti kunogona kukanganisa kuwedzera kwefupa kunodzivisa kukwirira kwemukomana. Panguva yekurapa, unofanira kutarisa kukura uye kukura kwemapfupa emwana wako. Kuchenjerera kunofanira kutorwawo kana vakuru vakwegura vari kurapwa uku nokuti vanonyanya kufunga nezvemigumisiro yaro yakadai sekuputika kwemaoko nemakumbo, chiropa / zvinetso zveprotate.
Zvinorwadza kuva nekuparara pamuviri zvakanyanya, uye sezvo ichi chinodhaka chinogona kukukanganisa pamuviri wako, iwe unorayirwa kuti ugare kure nazvo kana iwe uri kutarisira. Funga kushandisa nzira dzakatendeseka dzekudzivirira kuberekwa zvakadai sokuberekwa kwepiritsi mapiritsi kana makondomu kuitira kuti usapinda pamuviri paine mishonga iyi. Zvakadini kana zvichiitika pakarepo? Rega chiremba wako azive nezvazvo pakarepo.
Izvo zvisati zvasimbiswa kana mishonga iyi inogona kupfuudzwa kuburikidza nemukaka wehadzi. Zvisinei, inozivikanwa kuti inogona kukanganisa kubudisa mukaka zvichikonzera kukuvadza mwana anoyamwa. Kuti urege kunetseka, usashandise ichi chemishonga panguva yekuyamwisa. Iwe unofanirwawo kutarisa mazano echiremba usati wanyamwa.
Nzira yekuraira Testosterone Cypionate
Kuzvidzivirira kunogona kuita sezvinongoita basa rakaoma, asi kana iwe unonzwisisa kuti zvaitwa sei, iwe uchakoshesa chokwadi chokuti hazvina kukodzera kushushikana kupi zvako. Parizvino unogona kuzvibvunza; Ndotangira kupi? Ive wakadzikama, unonoka uye unofema mukati. Hezvino chaunofanira kuita:
Iva nechokwadi chekuti iwe une dhiyo yakakodzera yeTesttosterone Cypionate- Counter chengeta kuti une chirongwa chakakwana chechirwere ichi usati wapiwa chirwere.
Tora nyoka, yakakodzera sora uye syringe- Kuti uve nejeri re Testosterone Cypionate; inokurudzirwa kuti unoshandisa nhengo isina kubatwa isina kumboshandiswa kare. Nguva dzose shandisa imwe yakachena uye yakavharwa chero nguva iwe unoda kuva nejojo. Iwe unofanirwa kuziva kuti Testosterone Cypionate inofanana nemafuta uye yakasvibisa uye iwe unofanirwa, saka, shandisa nheyo yakakura kuti ugadzire mushonga. Mishonga yakawanda inorwadza kuitira kudzivirira izvi; iwe unogona kuzvitsiva nemunhu akacheka kamwechete nguva yake yekupa jekiseni. Ndapota cherechedza kuti kana nyanzvi kana sironi inodonha, haisisiri yakashata uye hauna imwe nzira kunze kwekuirasa.
Geza maoko ako zvakakwana uye ufukidze ganda rakaoma- Ruoko rwakakwana ruchenesa runokudzivirira kubva kune hutachiona, uye kana magirazi ako akasangana nezvinhu chero chipi zvacho kana nzvimbo dzisina kucheneswa, unofanira kuzvitsiva.
Dzai muzinga wakakodzera-Kuita izvi kuisa mweya mukati mehombodo kuti irere mukati mukati mhepo inoshandiswa. Kubudirira kweizvi ndechokuti iwe unogona kukurumidza kushandisa iyo mishonga pasinei nekuwanda kwayo. Iwe unogona kuvhara bhodhoro racho pasi uye uwane mhosho chaiyo yemishonga yaunoda.
Ikozvino shandura kune zviduku zviduku-Hakuna chikonzero chokuzviisa pasi pakurwadziwa kwakanyanyisa kana pane chimwe chinhu chaunogona kuita kuita kuti nzira yacho irege kurwadziwa. Kuti uone kuti mushonga hauna kupera sezvaunoita izvi, tora nheyo-kumusoro, tora mhepo uibvise. Shandisa ruoko rwakagadzirwa uye ushandise nemunhu akaonda. Inofanirawo kuva yakaora uye isina kushandiswa.
Aspirate the syringe-Kana iri kuuya kune injection, chero bhuvhuri yemhepo inopinda mumuviri inogona kukonzera dambudziko guru. Kuti uone kuti izvi hazviitiki, unoda kutsvaga. Izvo zvaunoita zvinobata sirineni inotarisana netsanga isina kubviswa. Tarisa zvakanakira chero mhepo inopisa iyo inogona kunge iri piringi. Flick kubva kune rumwe rutivi kuti uite kuti vaende kumusoro. Kana wangoona kuti mushonga wacho hauna kusununguka, simbisa mweya kunze. Kuti uzive kuti izvi zvose zviri kunze, kumirira donho remhinduro kuti ibve mumutsara wepiritsi. Ngwarira paunenge uchiita izvi kuti urege kudzima pasi.
Gadzirira nzvimbo yejojo-Iri jira rinofanira kupiwa kumusoro kwekunze kana chikamu chekumusoro chehudyu. Iyi haisi yega nzvimbo iyo jekiseni inogona kujowa, asi inowanikwa. Shandisa doro zvisina kuchena kuti udzize nzvimbo yacho. Nokuita izvi, mabhakitiriya haana nzvimbo paganda rako, uye inodzivirirawo zvirwere. Kuti urege kukuvadza midziyo yeropa kana mitsipa, sarudza nzvimbo yejojo ​​iyo iri pamusoro pekunze kwechikamu che glute.
Inject- Anofungidzira kuti angayira sei Testosterone? Bata sirinesi ine mishonga 90 digiri kumusoro kwejeri rejinga risina kubviswa. Kurumidzai kupindira mukati uye kunyatsoritora. Kana ukaona chero ropa mukati me sirindi iyo inoreva kuti wakakuvadza mutsara. Wana imwe nzvimbo yakakodzera uye injove mishonga zvishoma nezvishoma. Kunzwa kusuruvara kana kurwadziwa kwakakosha asi kana kurwadziwa kwacho kwakanyanya kuchimisa uye taura nachiremba pakarepo.
Cherechedza nzvimbo yechipinjo kana iwe wabudisa neta. Kuti uite izvi zvinobudirira, chengetedza nheyo yechipindiro yenyuchi uye isa nzvimbo yakachena yekotoni bhora. Dzingai zvose zvinoshandiswa nesero nesironi zvakakodzera. Kana uchinge uchinge uchinge usingawanzogadzikana, kubwinya kana kusuruvara, taura nechiremba pakarepo.
sei chengetedzo Testosterone Cypionate
Testosterone Cypionate inofanira kuchengetwa pa 20 kusvika ku25 degree Celsius. Uyewo uise nzvimbo yacho kubva pane chiedza, unyoro, uye kupisa. Chengetedza mishonga yose kure navana kuti udzivise uturu hwega. Kana imwe nguva mishonga ichipera, iponese kure zvakakodzera. Dzivisa kupfugama pasi pemishonga iyi kana kuidururira pasi kunyura sezvo zvingave zvakasvibiswa.
Mapapiro kuita testosterone Cypionate ne steroid powder
Kufarira kugadzira Testosterone Cypionate? Aya mapeji achakupa izvo zvaunoda.
1. Test Cypionate 5gram kutendeuka kusvika 20ml pa 250mg / ml
5gm ye test cyp
1ml yeBenzyl Doro rakaenzana ne5% BA
25 ml yemafuta eesame
18 / 20 inoyera nheyo
Whatman yakashata firiji
Chienzanisa 5 gramu yehupfu
Isai mupfu muhuni
Wedzerai BA kusvika pane
Isa mafuta muchoto uye upise. Inobatsira kuidya iyo. Pisa zvinodarika zvaunoda kuitira kuti ugone kuwana zvakakwana kubva pani.
Wedzera mafuta mumoto uye ponesa 2ml kwekupedzisira. Dhonzai vhudzi zvinyoro.
Iwe unogona kupisa musanganiswa kana uchida. Iwe unogona kuisa pane panopisa ganda kana ziso rekutofu.
Tora 18 kana 20 gauge nheyo uiise mumatombo asina kuchena. Uyewo, shandisai Whatman yakashata firiji.
Kuti udzikinure kusuruvara, isa chimwe chirairo mune iyo isina kuchena.
Kushandisa sirineni kubvisa mhinduro uye kuitungamirira kuburikidza neNeman filter.
Tora 2ml yemafuta yaiva mune imwe sironi uye inomirira Whatman muchigadzirisa.
2. Test Cypionate 10 gram kutendeuka 40 ml pa 250mg / ml
5 ml yemafuta eesame
2ml yeBenzyl Doro = 5% BA
10 magamu e test cyp
3cc uye 5 / 10cc seringiri
3. 60ml pa 250mg pam ml
8 ml we5% BA
7 milliliter yemafuta akabatanidzwa
15 magiramu eEypre Cypionate Powder
4. 250 ml pa 80mg pam ml
185 ml wemafuta akabatanidzwa
45mls yeBenzyl Benzoate
5ml yeBenzyl Doro
20 gramu dzeTestrosterone Cyp Powder
250 ml pa 200mg pam ml
5ml yeMiriwo mbeu yemafuta
45 ml weBenzyl Benzoate
50g ye Testosterone cyp Powder
5. 100ml pa 250mg pam ml
25 ml yemadhiro mbeu yemafuta
2ml yeBenzyl Doro
75 ml we 25g Testosterone cyp Powder
Nzira yekuita sei kupedza Testosterone Cypionate kubva pakudyiwa steroid powders
Iwe unogona kufunga kutenga steroid yakasvibiswa poda uye kuita Testosterone yakapedzwa iwe pachako. Tichakudzidzisa iwe kuita testosterone Cypionate powder.
Imwe milliliter ye 100 mg pam mlini inosanganisira:
100 mg ye Testosterone Cypionate powder
1 milliliter yeBenzyl benzoate
736 mg yeCotton mbeu yemafuta
45 mg yeBenzyl doro
Nhamba ye digital inogona kuyera 0.01g
A isina kuchena seringe filter 22um
Sirivha girasi Chirwere ichocho cheshamba chero ipi zvayo
Shanduro yemhando ipi zvayo
Danho rokutanga nderokuyera Testosterone Cypionate inodiwa uye inoisa iyo mubheki yegirazi. Wedzera Benzyl Benzoate uye Benzyl Doro.
Izvozvo zvinotanga kupedza pfu pfupi asi kana iwe uchida kukurumidza kushanda, unogona kushandisa bhati yemvura. Isa chidimbu mumvura shoma mupani kana chero imwe nzvimbo yakakodzera. Usashandise mvura inopisa zvikuru nokuti zvimwe zvigadzirwa zvinogona kusvibisa. Muchengetedza waunotarisira kushandisa unofanirwa kuva wekushisa yakafanana sechigadziriswe kana iwe ukasarudza kushambidza mhinduro iyo iyo inotakura mafuta inofanira kupisa zvakare. Chikonzero chekuita izvi ndechekuvimbisa kuti iyo yose yehupfu inoputika mukati memagetsi. Iva nechokwadi chokuti hakuna poda inoratidzika yakasiyirwa kumashure mumhinduro.
Tora huni inopisa mbeu yekotoni mumugadziro. Sakanidza zvakanaka uye uone kuti hakuna hormone swirls uye kana zvikaitika, tora mhinduro yacho kubva pakushambidza kwemvura uye uiendese kune tsvina yekuita.
Nhanho inotevera inoshandisa sirinho yekugadzira mhinduro dzaunoshandisa kuisa nayo. Iwe unogona kushandisa siriniti imwechete kana kuti siriti shomanana kakawanda. Bvisa 0.22 um sterile syringe filera uye shandisai ruvara rutsvuku muchikamu chiduku uye muise sirin.
Shandisa doro rewaini kuti ubvise chikamu chepamusoro chebasa rakaipa. Isai tsvina yakasvibirira mairi uye isa nheyo yakagadzirirwa pane siriniti firimu mukati memhepo.
Pane dzimwe nguva unogona kuziva kuti firiji inogona kudziviswa kana kuti inogona kuderedza. Muchiitiko ichi, unogona kugadzirisa firiji nemumwe kuchengetedza nguva. Mhando uye chiyero cheSteroid poda iyo yaunoshandisa ndiyo inotarisa nguva yenguva iyo inotora.
Chigadzirwa chacho chakagadzirira kushandiswa mushure mekunge uchishambadzira chigadzirwa muhutera husina kunaka.
Testosterone Cypionate kuongorora
Wakambonzwa pamusoro peongororo dze Testosterone Cypionate here? Ichi chizivo ndicho chakanakisisa uye kana iwe usati waita zvepfungwa dzako, unogona kufunga kuverenga zvinotevera.
Yuan anoti "Sezvo ndakatanga iyi mishonga gore rapera, ndaona zvakakosha mune zvekurovedza. My abs iri kuoneka uye izvi zvakandiita kuti ndide chido chekuita zvekunyadzisa kunyange ".
Li anotaura kuti haambofi akasungirira kuenda kumitambo. Iye anokwanisa kuenda kubasa rekuvhima zuva rega rega asina mbwa akaneta. Zuva rimwe nerimwe mushure mebasa anoenda kumitambo uye anoita basa rakawandisa chero nguva yaanonzwa.
Chen ave achijova 200 mg vhiki mbiri kubva apo chiremba akaraira. Anoti "Kusvika parizvino ndiri munzira yakarurama mukuwana musimba uye kuora muviri. Ndinotenda nekuda kwechirwere ichi, ini zvino ndinonzwa semurume ".
Testosterone Cypionate mutengo
Iye zvino zvaunoziva kuti chigadzirwa ichi chinogona kukuitirei, ungada kuziva Testosterone Cypionate mutengo. Saka Testosterone Cypionate inodhura zvakadini? Izvo zvinoenderana nehuwandu hwaunoda uye weiyo yako.
Inogonawo kusiyanisa pane zvivako zvakasiyana zvichienderana nenzvimbo.
Nzira yekutenga Testosterone Cypionate online
Iwe unogona kutenga Testosterone Cypionate kuburikidza nekukanda kweganda. Iyo inouya nemitemo yakawanda kusanganisira zviri nyore. Hezvino chaunofanira kuita;
Tsvaka webasa reAASraw.com
Tsvaga izwi rokuti "testosterone cypionate."
Zadza fomu yekushandisa yekutenga uye uuye nayo. Ichabatanidza huwandu uye nzvimbo yako.
Iwe unogona kudiwa kuti uzadze mapepa emakemheni mashomanana kuti uone kubvumirwa kwako kutenga chigadzirwa. Iwe unokwanisa kukurumidza kuizadza mukati uye kuisa. Nyanzvi yedu ichazoiongorora uye zvichida inogamuchira urongwa hwako.
Kana imwe nguva chirongwa chako chichigamuchirwa, iwe unogona kuita ikozvino kubhadhara uchishandisa nzira yakanakisisa, uye kana yasvika, zvigadzirwa zvinotumirwa pakarepo. Nzvimbo yako ichasarudza kuwanda kweiyo nguva iyo michina ichave iri pakufamba.
Chokwadi, kana iwe uchida kuita shanduko murwendo rwako rwekuvaka muviri, ichi ndicho chinhu chaicho. Iwe hauzombofi wakademba kusarudza nzira iyi sezvo zvikomborero zvisingaverengeki. Iwe zvino unogona kumira uchitarisa imwe steroid nokuti wave watowana uyo ane simba risina kukodzera mumusika.
Chii chinowedzera kuti iwe unogona kudya chinhu chipi zvacho chaunoda kunze kwekutya kwekudya mafuta. Mumuviri wako uchashandurwa, uye iwe uchazadzisa muviri wako wakanaka. Iwe unoda zvakare kudzidziswa zvishoma kuti uwane mutumbi waunogara uchida.
Hapana chikonzero chokuzvidya mwoyo pamusoro pekudzikinura kwako mushure mekuita basa rakaoma. Iko nokuti chigadzirwa ichi chichawedzera kukanganiswa kwe nitrogen uye protein synthesis. Uyezve, uchawana zvimwe zvinokurudzira, uye kana izvi zvave zviri dambudziko kwauri, iwe unogona kuva ne psych yose yekukandira-kutanga chitendero chako zvakare.
Testosterone Cypionate haina kupikira kukuita iwe unofadza, asi ichakubatsira iwe kuti uite zvinangwa zvemuviri zvichakubatsira iwe kukunda mimwe yemari nemakwii.
Mune basa redu, tinoshandisa vanhu vakasiyana-siyana kubva kumarudzi akasiyana-siyana. Ive ruzivo rwehutano, ruzivo rwakaisvonaka, uye kushamisa kwavanoita kune izvo zvinoita kuti tibudirire. Sechirongwa, tinotarisira kuwedzera kubudirira kwavo kuburikidza nekudzidzisa nguva dzose. Isu tinovapawo zvigadzirwa zvakakwana zvekutaurirana kuwedzera maitiro avo, kuzvipira, uye kubudirira.
Tinopa mikana yakanaka yepamusoro pamutengo wakakwikwidza. Zvigadzirwa zvedu zvakachena, uye iwe unogona kuva nechokwadi chokuti unhu hwavo hwakanaka hahuna kuve. Inogadziriswa nekuti tinoshandisa zvigadzirwa zvakanakisisa pane zvese zvatinoita pakugadzira. Panguva yekugadzira, tinoteerera kumitemo yose uye checks chekuita kuti tione kuti tinopa zvinhu zvinogutsa zvinodiwa nevatengi vedu.
Isu tinoita zvose zvatinokwanisa kuti kuchengetedza mamiriro edu ezvinhu akacheneswa nekuita chokwadi kuti mabasa atinoita isu haaipindi maitiro. Pakupedzisira, vatengi vedu ndivo musana wedu. Basa redu rekutengesera rinonyatsoteerera uye rinoteerera kune wese mutengi. Chimwe chinhu chinotiparadzanisa kubva kune vamwe vatapi venzvimbo ndechokuti tinotora mhinduro dzevabereki. Iva kuva kunyunyuta kana kurumbidzwa; inzwi rako rinogamuchirwa nguva dzose.
Raira kubva kwatiri nhasi uye uone mabasa edu akanaka. Kwete chete iwe uchagamuchira zvigadzirwa zvako nokukurumidza asi ivo vachawana basa racho riitike kwauri.
Nheyo uye Maitiro eEctocrinology uye Metabolism, yakagadziriswa naKenneth L. Becker peji 1189-1893
Testosterone: Chiito, Kukwana, Kuchinja, kwakagadziriswa na E. Nieschlag, HM Behre 272-317
Williams Textbook of Endocrinology, NeShlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, peji 758-766
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weSaifiram 10 zvinhu zvaunofanira kuziva musati watora DMAA